Sida aad ugu adkaysan lahayd go'aamada sanadka cusub | BehMaster
Bogga ugu weyn/iPhone/Sida aad ugu adkaysan lahayd go'aamada sanadka cusub
Sida aad ugu adkaysan lahayd go'aamada sanadka cusub
Intii lagu guda jiray subaxii uu ceersanayey ee Janaayo 1-deedii, waxaad xoqday liis degdeg ah oo ah waxyaabo aad u malaysay inaad iska dayso ama aad go'aansato 2018. Yoga badan, socod badan, baabuur wadin yar, keegyo yar, waxaa laga yaabaa inaad bilowdo inaad ka fikirto. Malaha liiskani wuxuu la mid yahay kii aad qortay bilawgii 2018ka.
Sidee u socotaa? Xun, sax? Waxay u badan tahay inaad ku qaadatay usbuucii la soo dhaafay adigoo dareemaya dambi kale, oo aan waxtar lahayn. Taasina maaha sababtoo ah ma aad qaadi kartid caado - ilaah waa ogyahay inaad horeba u heshay caadooyin xun xun oo kugu filan oo aad karti u leedahay ilaalinta. Maya, khalad baad uun baad u soo socotaa. Waxaana laga yaabaa inaad xoogaa caajis ah tahay. Aynu hagaajino taas, oo aynu barano sida loo abuuro xariijimo guuleed
Talaabada koowaad: Ha iibsan qalabka
Talaabada ka mid ah hawl kasta oo cusub waa inaad internetka gasho oo aad hubiso qalabka ay tahay inaad soo iibsato si aad u sameyso. Tani waxay dareemeysaa inaad wax sameyneyso, laakiin ma tihid. Iibsashada surwaalka yoga cusub la mid ma aha samaynta yoga.
Intaa waxaa dheer, waa lacag lumis. Ma jirto qaab aad ku ogaan karto qalabka aad u baahan tahay ilaa aad wax badan ka ogaato hawsha.
Aad ha uga werwerin qalabka - waa wax jeedin.
Sawirka: Charlie Sorrel/Cult of Mac
Taasi waxay tidhi, waxaad u baahan doontaa xoogaa qalab ah. Kuma bixi kartid adigoo wata kabaha xafiisyada ama kabaha xafiisyada. Waxaad u baahan tahay sariir yoga si aad u sameyso yoga. Haddii aad rabto inaad barato gitaarka, waxaad u baahan doontaa gitaar. Xaaladdan oo kale, kaliya iibso wax kasta oo WireCutter uu kuu sheego in ay u fiican tahay dadka intooda badan, oo iska illow. Haddii aad ku dhegto, markaa waxaad naftaada ku abaal marin kartaa qalab ka wanaagsan. Waxaa dheer, waxaad wax badan ka ogaan doontaa baahiyahaaga.
Qaybtan waxa sidoo kale loogu yeedhi karaa "bilow tartiib tartiib ah," Haddii hawshaadu tahay "in aad joojiso cabbitaanka," taasi waa mid aad u weyn, oo aad u muuqata. Isku day inaadan cabbin ilaa dhamaadka usbuuca, tusaale ahaan. U kala qaybi hawsha qaybo aad dhab ahaantii qaban kartid. Aad bay uga wanaagsan tahay inaad kafeega ku qaadato hal malqacad oo sonkor ah halkii aad ka joojin lahayd sonkorta.
Apple Watch ayaa ku xasuusin doona inaad dhaqaaqdo.
Haddii hawshaadu tahay inaad "bilowdo orodka," markaa caqabadaaga ugu weyn ayaa laga yaabaa inay dhab ahaantii isku beddesho dhammaan qalabkaaga orodka, abuurista liiska heesaha ugu fiican, iyo inaad ka baxdo guriga. Taa beddelkeeda, orod boqol yard marka aad dibadda u baxayso (hubi inaad xidhatay kabaha kabaha, ee ha xidhnayn flip-flops). Dabadeed boqol yard oo kale. Waxaan rajeyneynaa inaadan aad u dhididi doonin, oo waxaad bilaabi doontaa inaad hesho caado.
Sidoo kale, ha isku qorin xubinimada jimicsiga adigoo rajaynaya inay kugu dhiirigelin doonto inaad sii wadato. Dhiirigelintu waxay u baahan tahay inay xaggaaga ka timaado, sida hippies-yadu u odhan karaan. Isku day inaad bixisid si aad u bilowdo kalfadhiyada gaarka ah. Haddii goobta jimicsiga/yoga/kung-fu dojo aysan kuu ogolaaneynin inaad tan sameyso, dooro mid ka duwan.
Ujeedada halkan waa in meesha laga saaro caqabadaha bilaabista. Nidaam maalinle ah oo ka fiirsasho hal saac ah ayaa si sax ah u socon doona hal maalin. Haddii aad ku tuujin karto laba kulan oo 20-daqiiqo ah, si kastaba ha ahaatee, markaa waxaad abuuri doontaa caado, oo isla markiiba waxaad samaynaysaa fadhiyo saacado-dheer.
Hel talo iyo caawimo
Helitaanka gargaarku runtii way caawin kartaa.
Tani waxay ku xidhan tahay hawsha, laakiin hel talo haddii aad u baahan tahay. Tusaale ahaan, sababtoo ah orodku uma baahna qalab gaar ah, macnaheedu maaha inaad hadda bilaabi karto. Isku day taas oo waxaad isla markiiba heli doontaa naftaada dhaawac. I weydii sidaan ku garanayo.
Weydii saaxiib orda. Joojinta sigaarka? Ka fakar koox taageero.
Ku tiri Streaks
Streaks ayaa kuu ogolaanaya inaad tiriso wax, oo u rog taxane maalmo badan ah.
Hadda waxaan gaadhnay qaybtii aad wada sugteen - apps-ka. Hal dariiqo oo fiican oo wax loogu dhejiyo waa in la tiriyo. Tiri tillaabooyinkaaga, oo tiri kalooriyadaada, oo waxaad horay u sii waddaa inaad hoos u dhigto. IPhone-ku waxa uu leeyahay pedometer-ku-dhisan-- waa in aad kicisaa.
Sidoo kale, IOS waxa ay la socotaa wakhtiga Shaashada, oo ah habayn dhan kaas oo kuu ogolaanaya in aad xisaabiso inta wakhtiga aad ku qaadato abka. Xitaa waxaad samayn kartaa xad
Laakiin maanta waxaan ku talinayaa Streaks, app ah oo loogu talagalay dabagalka iyo ururinta, si fiican, wax kasta. Streaks ayaa tirinaya wax kasta oo aad rabto. Talaabooyinka, koobabka biyaha, orodka, maalmo aan sigaar cabbin. Waxaad u dejin kartaa si aad ula socoto tiro kasta oo shay ah, ka dibna ku aragto natiijooyinka jaantusyada, jaantusyada, iyo garaafyada. Waxa kale oo ay la midaysaa app-ka caafimaadka ee iPhone-kaaga, si ay tusaale ahaan, ula midayso pedometer-ka ku dhex jira.
Iyadoo Streaks uusan kuu sameyn doonin jimicsigaaga ama jimicsigaaga, kuwa aan go'a lahayn ee maalmo dheer ah ayaa noqon kara dhiirigelin xoog leh. Kaliya weydii qof kasta oo isticmaala abka Pedometerka si uu u gaaro yoolkooda maalinlaha ah ee 10,000-tallaabo.
Qalab kale oo weyn waa Apple Watch. Waa raadraaca dhaqdhaqaaqa la yaab leh, oo kuu ogolaanaya inaad gasho jimicsiyada, iyo sidoo kale cabbiraadda dhaqdhaqaaqaaga oo kugu dhiirigeliya inaad ka baxdo dabadaada. Graham Bower-kayaga ayaa leh habka cajiibka ah ee loo isticmaalo isticmaalka Apple Watch si uu u ordo oo uu taam u noqdo.
Download: Streaks ka App Store (iOS)
U diyaargarow inaad shaqeyso muddada dheer
Midkoodna ma fududaan doono. Helitaanka caadadu waa shaqo adag. Waxaad u baahan tahay inaad dhab ahaantii ordo. Haddii aad baranayso qalab muusig, waa inaad ku celcelisaa maalin kasta. Wayna adagtahay. Gym-ka, waxaad dareemi doontaa natiijooyin aad u dhakhso badan. Laakin, dheh, barashada gitaarka, waxay qaadan doontaa waqti dheer bilaa abaal-marin. Way adagtahay. Runtii adag. Waa yaab in qof kastaa si fiican u ciyaari karo qalab kasta oo muusig ah.
Waxaad u baahan tahay inaad ku raaxaysato habka. Deji yoolal yaryar. Maskaxdaada ku hayso aragtida dheer, laakiin ku fooji maalin-maalin kasta. Haddii aad naftaada la barbar dhigto kuwa kale, ama aad mustaqbalka khiyaaliga ah aad la barbar dhigto, waad guuldareysan doontaa. Haddii aad is barbardhigi karto sidaad ahayd bishii hore, waad fiicnaan doontaa.
Way adag tahay in la aqbalo in arrimuhu ay qaadan karaan waqti dheer, marka aan aad ula qabsanay ku qanacsanaanta degdegga ah, keenista Amazon isla maalinta ah, iyo Uber. Laakin waa in aad aqbashaa, oo aad xattaa la aqbashaa. Ku raaxayso xaqiiqda ah inaad gelayso safar nololeed oo dheer. U diyaargarow inaad ku raaxaysato isbeddelada aad ku arki doonto jidka.
Taasi waxay u egtahay gobbledygook hippy, laakiin kiiskan waa run. Tabaha ugu fiican ayaa kaliya ku bilaabi doona wadadaada cusub. Adiga ayay ku xiran tahay inaad shaqada geliso oo aad sii wado.
Sidee PopSockets u Barwaaqaysan Ka tagista Amazon ka dib
6 Hacks Localization si loo kordhiyo Gaadiidka Goobta WordPress